एमालेको नयाँ अध्यक्षमा भीम रावल हुने घोषणा … !
October 2, 2021 October 3, 2021 N88LeaveaComment on एमालेको नयाँ अध्यक्षमा भीम रावल हुने घोषणा … !
काठमाडौं । केही दिन अघि मात्रै सुदूरपश्चिम ईन्चार्जबाट हटाईएका भीम रावललाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष घोषणा गरिएको छ । उनलाई गृह प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षले अबको नेकपा एमालेको केन्द्रीय अध्यक्ष भीम रावल भएको घोषणा गरेका हुन् । अबको नेकपा एमालेका अध्यक्ष भिम रावल हुने भएको सुदूर पश्चिम डडेलधुरा जिल्लाका एमालेका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साउँदले बताएका छन् । […]
उपेन्द्र यादव र प्रचण्डकै डिजाइनमा लालबाबु राउतको हेडक्वार्टरमा अख्तियारले छापा हानेको खुलासा
October 2, 2021 N88LeaveaComment on उपेन्द्र यादव र प्रचण्डकै डिजाइनमा लालबाबु राउतको हेडक्वार्टरमा अख्तियारले छापा हानेको खुलासा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास क्षेत्रीय कार्यालयले बुधबार प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा हान्यो । ‘प्रदेश २ को ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा कम्पनी नखुलाई ११ करोडका १७ हजार साइकल किनेर करोडौं अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली सिधै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको हेडक्वार्टरमा घुसेको थियो । तर राजनीतिज्ञको हेडक्वार्टरमा […]
पूर्वयुवराज पारश सरकारसँग हिँड्ने युवती बारे नयाँ खुलासा (हेरौँ भिडियो )
October 2, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वयुवराज पारश सरकारसँग हिँड्ने युवती बारे नयाँ खुलासा (हेरौँ भिडियो )
पुर्वयुवराज पारश शाह अहिले फेरि चर्चामा छन् । अरु केहि नभएर मध्यरातमा हार्ले डेभिडसन बाईकमा एक युवतिसँग पारश देखिएपछि चर्चा चुलिएको हो । पारशको जस्तै कालो छालाको पाईन्ट र ज्याकेटमा देखिएकि ती युवति अरु कोहि नभएर डिजे रहेको प्रतिक्रियाहरु सामाजिक संजालमा आइरहेको छ । काठमाडौँको ठमेलमा मास्क लगाएर पारशको बाईकमा देखिएकि ती युवति डिजे रहेको […]
एमालेले ल्याएको यस्तो क’डा एजेण्डाले दिल्लीमा मच्चियाे खैला-बैला, ओलीको चौतर्फी वाहावाही !
October 2, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले ल्याएको यस्तो क’डा एजेण्डाले दिल्लीमा मच्चियाे खैला-बैला, ओलीको चौतर्फी वाहावाही !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाउन भारतले मि’चेको भूमि फिर्ता ल्याउने एजेण्डा अघि बढाएको छ । एमालेले बढाएको यो एजेण्डाले भारतमा समेत त’रंग पैदा गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको ७३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पहिलो श’क्तिको रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख […]
ओलीले धोका दिएपछि मैले हेडक्वार्टरमा ‘बम’ गिराइदिएँ – प्रचण्ड
October 2, 2021 N88LeaveaComment on ओलीले धोका दिएपछि मैले हेडक्वार्टरमा ‘बम’ गिराइदिएँ – प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष केपी ओलीले धोका र छलकपटको नीति लिएपछि आफूले हेडक्वार्टरमा ‘बमबारी’ गरेको बताएका छन् । उनले ओलीविरुद्ध आफूले पार्टीमा प्रस्तुत गरेका दस्तावेजलाई बमको संज्ञा दिए । माओवादीको प्रदेश सम्पर्क समिति भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘मैले पेश गरेको डकुमेन्ट भनेको बमवार्ड द हेडक्वाटर’ हो । […]
October 2, 2021 N88LeaveaComment on नेपालमा ५ लाखमा हुने मिर्गौला प्रत्यारोपणमा झलनाथले ८१ लाख सिध्याए
काठमाडौं । नेपालमा ५ देखि १० लाखमा हुँदै आएको मिर्गौला प्रत्यारोपण पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका लागि ८१ लाख रुपैयाँ लागेको तथ्य फेला परेको छ । भारतस्थित अपोलो हस्पिटलमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका झलनाथ खनालले राज्यलाई ८१ लाखको बिल तिराउन लगाएका छन् । उनले कानुनविपरीत राज्य कोषबाट उक्त रकम पाएका हुन् । नेपालमा गर्ने हो भने झलनाथ खनालको […]
October 2, 2021 N88LeaveaComment on देशलाई पार लगाउने केपी ओली बाहेक कोही छैन
काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं महोत्तरी जिल्ला इञ्चार्ज रामदयाल मण्डलले विधान महाधिवेशनले एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको माहोल बनाएको बताउनुभएको छ । एमालेको विधान महाधिवेशनमा भाग लिइरहनुभएका नेता मण्डलले विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिनि अधिवेशन भएको बताउनुभयो । विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन, राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पास गरेर पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो […]